Tue, Jul 14, 2020 at 10:14am
काठमाडौँ, २३ वैशाख । लगातार घट्दै आएको शेयर बजार सोमबार भने करिब २२ अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक २१ दशमलव ७३ बिन्दुले वृद्धि भई एक हजार २९९ दशमलव ४१ बिन्दुमा पुगेको छ । प्रतिशत आधारमा हेर्दा आज बजार एक दशमलव ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक..
हङकङ, २३ बैशाख । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को सातादेखि लागू हुनेगरी २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा करबृद्धि गर्ने चेतावनी दिएसँगै सोमबार एसियाली शेयर बजारमा ठूलो गिरावट आएको छ । विश्व अर्थतन्त्रका पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापारिक तनाबलाई मत्थर बनाउन र नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न केही महिनादेखि जारी वार्ता दुबै पक्षबाट “सकारात्मक” रहेको बताइए..
काठमाडौँ, २२ वैशाख पछिल्ला दिनमा शेयर बजार लगातार ओरालो लागेको छ । साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा शेयरको मूल्य दोहोरो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक १६.७१ बिन्दुले घटेर एक हजार २७७.६८ बिन्दुमा झरेको छ । ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ३.६८ बिन्दुले घटेर २७३.९६ बिन्दुमा ओर्लिएको छ । नेप्से परिसूचक मात्रै होइन,..
काठमाडौँ, २१ वैशाख । धितोपत्र बजारमा यस साता शेयरको मूल्यमा गिरावट आएको छ । कूल चार दिनमा भएको कारोवार रकम रु चार अर्बमाथि रहेपनि कारोवार मापक नेप्से परिसूचक भने २०.१२ विन्दुले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कूल १६७ कम्पनीको एक करोड २७ लाख सात हजार ९४८ कित्ता शेयर रु चार अर्ब ४१ करोड १६ लाख ४९ हजार ८७७ मूल्यमा..
काठमाडौँ, १९ वैशाख । रसुवागढी हाइड्रो पावर लिमिटेड र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको साधारण शेयरको बाँडफाँट गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बिहिबार भएको बाँडफाँटअनुसार रसुवागढीमा आवेदन गर्ने सबैले ४० कित्ता शेयर पाएका छन् । यस्तै साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा आवेदन गर्ने सबैले २० कित्ता शेयर पाएका छन् । रसुवागढीमा आवेदन गर्ने लगानीकर्ताले अधिकतम ५० सम्म शेयर पाएका छन् भने ४० कित्तासम्म..
काठमाडौँ, १९ वैशाख पछिल्ला दिनमा विभिन्न कम्पनीले साधारण शेयर बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ । यसै क्रममा दुई लघुवित्त संस्थाले एकै दिनदेखि साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेका छन् । जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यही वैशाख २७ गतेदेखि साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारीका साथ आज विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । जनसेवीले चार लाख ३२ हजार ९९० कित्ता..
काठमाडौं, १८ बैशाख । लघुवित्त संस्थाको संख्या अधिक भएको भन्दै केन्द्रीय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जरमा जान भनिरहेका बेला आधा दर्जन लघुवित्तले आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन् । यी मध्ये केहीले निष्कासन गर्न अनुमति समेत पाइसकेका छन । विभिन्न आधा दर्जन लघुवित्तले २३ करोड ९८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको २३ लाख ९८ हजार ५१० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन । आईपीओ..
काठमाडौँ, १८ वैशाख । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरेको रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाले निष्कासन गरेको साधारण शेयर बिहीबार बाँडफाँड हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको सभाहलमा मन्त्री वर्षमान पुनले शेयर बाँडफाँड गर्ने बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । दुवै आयोजनाले निष्कासन गरेको साधारण शेयरमा आवेदन दिने जति सबैले शेयर पाउने भएका छन् । रसुवागढी हाइड्रोपावरमा न्यूनतम १०..
काठमाडौँ, १७ वैशाख १ हजार ३०० को बिन्दुमा पुगेको शेयर पुनःओरालो लागेर एक हजार २९८ बिन्दुमा झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्चनका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ११.७० बिन्दुले घटेर एक हजार २९८.६० बिन्दुमा पुगेको छ । लगातार उकालो लाग्दै आएको बजार सोमबारदेखि ओरालो लाग्न थालेको हो । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.७४ बिन्दुले घटेर २७९.१० मा..
काठमाडौँ, १६ वैशाख । लगातार उच्च अङ्कको वृद्धि हुँदै आएको शेयर बजार सोमबार भने थामिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४.२१ बिन्दुले घटेर एक हजार ३१०.३१ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि १.०१ प्रतिशतले घटेर २८१.८४ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्से परिसूचक घटेपनि कारोवार रकम भने सोमबार पनि अर्बमाथि रहेको..
काठमाडौं, १५ वैशाख । लगातार उकालो लाग्दै आएको शेयर बजारमा आज पनि दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक २२.३९ विन्दुले बढेर एक हजार ३१४.५१ विन्दुमा पुगेको छ । दोस्रो बजार लगातार सुधार हुने क्रममा कारोबार सुरु भएको दुई घण्टामै ८० करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । आइतबार कारोबार सुरु भए देखिनै बढ्न थालेको थियो..
काठमाडौँ, १४ वैशाख । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरेको रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको साधारण शेयरमा सर्वसाधारणले उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएका छन् । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका दुई सहायक कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको शेयरमा रु तीन करोड बढीको आवेदन परेको हो । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव कोइरालाका अनुसार दुई वटा कम्पनीको साधारण शेयरमा रु तीन करोड १७ लाख बराबरको आवेदन परेको..
काठमाडौं, १४ वैशाख । यस साता शेयर बजारसँगै कारोबार रकम समेत राम्रो सुधार आएको छ । गत साताको तुलनामा कारोबार ९१ प्रतिशतले बढेको छ । यो साता ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ । गत साता दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । एक साताको अवधिमा बाणिज्य बैंकको मात्रै तीन अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। त्यस्तै विकास बैंकको २०५..
काठमाडौँ, १३ वैशाख वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न ५ वटा प्रस्तावित कम्पनीहरुलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न बोर्डमा पाँच वटा प्रस्तावित कम्पनीहरुले पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरेकोमा वस्तु बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम (५) बमोजिम उक्त कम्पनीहरुले सम्पूर्ण कागजात तथा विवरणहरु पेस नगरेकाले स्वीकृति दिन अस्वीकार गरिएको होे, बोर्डको भनेको छ । वस्तु..
काठमाडौँ, १२ वैशाख लगातार उकालो लाग्दै आएको शेयर बजारमा आज पनि दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक १२.८३ विन्दुले बढेर एक हजार २९२.१२ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.७३ विन्दुले बढेर २७९.६७ विन्दुमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार कूल १७६ कम्पनीका ४५ लाख १९ हजार ५८२..
काठमाडौँ, ११ वैशाख : गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यही वैशाख १६ गतेदेखि साधारण शेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । गुराँसले रु एक सय अङ्कित दरमा कूल रु दुई करोड ५० लाख बराबरको दुई लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । आवेदकले न्यूनतम् १० देखि अधिकतम ५०० कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।छिटोमा यही वैशाख २० गते र ढिलोमा आगामी..
काठमाडौँ, वैशाख ११ । शेयर बजारमा राम्रो सुधार आयको छ । नेप्से १९ दशमलव १४ अंकले बढेर १ हजार २ सय ७९ दशमलव २९ को बिन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै गरी ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको मापन सेन्सेटिभ परिसुचक ४ दशमलव ८० अंकले बढेर २ सय ७६ दशलमव ९४ अंकको बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । यसदिन १ सय ७२ कम्पनीको ३४ लाख ८ हजार..
काठमाडौं, १० वैशाख । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रसुवगढी हाइड्रोपावर र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको प्राथमिक शेयरमा आवेदन दिने सयम दुई दिन थप गरिएको छ । मेरो शेयरमा अनलाईन आवेदन दिदा समस्या आएको भन्दै लगानीकर्ताले बोर्डमा गुनासो गरे पछि निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक र सिडिएससीलाई दुई दिन समय थप्न निर्देशन दिएको छ । लगानी कर्ताले अब बैशाख १२ गते सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । दुबै..
काठमाडौँ, १० वैशाख धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्यमा झिनो अङ्कको सुधार आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ३.७४ विन्दुले बढेर एक हजार २६० विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवारमापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.९ विन्दुले बढेर २७२.२७ विन्दुमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार कूल १७६ कम्पनीको १८ लाख एक हजार ५२२ कित्ता शेयर रु ६१ करोड..
काटमाडौं, १० वैशाख । रसुवागढी हाइड्रोपावर र सान्जेन जलविद्युत कम्पनीमा मागभन्दा बढि आवदेन परेको छ । निष्काशन गरेको प्राथमिक शेयरमा मागभन्दा बढि आवदेन परेसँगै पहिलो चरणमै निष्काशन बन्द गर्ने भएका छन् । रसुवागढी हाइड्रोपावरले १११ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने सान्जेनले जलविद्युत कम्पनीले १४.८ मेगावाट क्षमताको सान्जेन माथिल्लो र ४२.५ मेगावाट क्षमताको सान्जेन लविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । दुबै आयोजनाले..
काठमाडौ, ९ वैशाख । लगानीकर्ताले शेयर स्टक बढाउन मार्जिन सुविधा लिन थालेका छन् । सोमबार नेप्से परिसूचक ७ दशमलव २६ अंकले घटेर १ हजार २ सय ५६ दशमलव ९४ अंकमा पुगेको छ । तर बजार सुधार हुन थालेसँगै मार्जिन कर्जा लिएर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता बढ्न थालेका हुन् । शेयर बजार लगातार सुधार हुन थालेपछि बैंकहरुले पनि बोलाइ बोलाइ शेयर कर्जा दिन थालेका छन्..
काठमाडौँ, ८ वैशाख नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको साधारण शेयरको बिक्री आजदेखि शुरु भएको छ । सो संस्थाले रु एक करोड ६१ लाख ७७ हजार ८०० बराबरको एक लाख ६१ हजार ७७८ कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेको हो । कूल जारी पूँजीको ३२.५ प्रतिशत साधारण शेयर बिक्री गर्न लागिएको बताइएको छ । साधारण शेयर बिक्री बन्द छिटोमा यही वैशाख ११..
काठमाडौं, ८ वैशाख । धितोपत्र बजारमा यस साता उत्साहको सञ्चार भयो । 'बुलिस ट्रेण्ड' सुरु भएको विश्लेषण गर्दै शेयर बजारमा लगानी थपिन थालेको छ । पुरानो घाटा पूर्ति गर्न लगानीकर्ताले शेयर थप्न थालेपछि आइतबार बजारमा थप सुधार देखिएको छ । विगतमा बजार केहि सुधार हुनेवित्तीकै नाफा बुक गर्ने प्रबृत्तिले सूचक माथि जान पाउँदैन थियो । यसपटक भने बजार थप सुधार हुने अपेक्षामा..
काठमाडौँ, ७ वैशाख धितोपत्र बजारमा यस साता उत्साहको सञ्चार भयो । कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४३ दशमलव ५९ बिन्दुले वृद्धि भएको छ । वैशाख २ गतेदेखि बजार वृद्धि हुने क्रम शुरु भएको हो । सातामा चार दिन कारोवार भए । सोमबार बजार एक हजार १८८.७१ बिन्दुमा पुग्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार साताको अन्तिम दिन बजार बढेर एक हजार २३२.३० बिन्दुमा पुगेको..
महिला शशक्तिकरण : गृहिणी पनि शेयर बजारतर्फ आकर्षित
खस्यौली, ६ वैशाख शेयर बजारको केन्द्र बन्न थालेको प्रदेश नं ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा गृहिणीले पनि शेयर बजारमा लगानी गर्न थालेका छन् । गृहिणी, शिक्षक र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा आबद्ध महिला लगानीकर्ताले बुटवलस्थित लिञ्च स्टक मार्केट लिमिटेडमार्फत सो लगानी गरेका हुन् । उनीहरुले रु तीन लाखदेखि रु १० लाखसम्म लगानी गरेर लाभांशसमेत लिएकोे उक्त लिमिटेडका अधिकृत सोनम पाठकले..
जनताको जलविद्युतमा सभामुख महरा सहभागी, १ अर्ब ५४ करोडको शेयर बिक्री शुरु !
काठमाडौँ, ६ वैशाख । सरकारले नेपाली जनतालाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा उत्साहपूर्ण सहभागिता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । देशका महत्वपूर्ण पदमा आसिन हुनुभएका व्यक्तिले नै सो कार्यक्रममा सहभागी भई जनतालाई सहभागिताका लागि आग्रह गर्नुले पनि त्यसको महत्व बढ्दै गएको छ । स्वदेशी लगानीमा नै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र..
शेयर बजारमा सुधारको संकेत ! १ महिनामा ८५ अंकको फड्को
काठमाडौं, ५ वैशाख । अहिलेको अवस्था हेर्दा शेयर बजारमा राम्रो सुधारको संकेत देखिएको छ । एक महिनाको अवधिमा शेयर बजारमा ८५ अंकले सुधार भएको छ । शेयर बजार अझै सुधार हुने भन्दै लगानीकर्ताले लगानी बढाइरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा कारोबार रकम ७० करोड रुपैयाँ नाघ्दै आएको छ । अबको एक हप्तासम्म बजार सुधार भैरहेको खण्डमा शेयर बजारको वियरिस ट्रण्ड समाप्त हुने अनुमानसँगै साना..
शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढ्यो, कुमारी बैंकको सबैभन्दा बढी कारोवार
काठमाडौँ, ५ वैशाख लगातार बढ्दै आएको शेयर बजारमा बिहिबार पनि सोही क्रम जारी रह्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । कूल १५.२२ बिन्दुले बजार बढेर एक हजार २३२.२६ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ३.९९ बिन्दुले बढेर २६५.५६ बिन्दुमा पुगेको छ । कूल १६५ कम्पनीको २४ लाख ६४ हजार..
शेयर बजारमा सामान्य वृद्धि, एनएमबी बैंक शीर्ष स्थानमा
काठमाडौँ, ४ वैशाख मङ्गलबार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको शेयर बजारमा आज भने सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ४.९९ विन्दुले बढेर एक हजार २१७.०४ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.३२ विन्दुले बढेर २६१.५७ विन्दुमा पुगेको छ । आज कुल १७१ कम्पनीका २८ लाख एक हजरा ६१३ कित्ता शेयर रु..
चुकेनी जलविद्युत कर्णालीको विकासमा कोशेढुङ्गा, सबै घरधुरी शेयर धनी
खलङ्गा, ४ वैशाख जुम्ला पातारासी गाउँपालिकाले चुकेनी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर लगानीमा गाउँपालिकाका सबै घरधुरीलाई सहभागी गराएको छ । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाको चुकेनी खोलाबाट उत्पादन गरिने ९९८ किलोवाटको सो आयोजनामा गाउँपालिकाले सबै घरधुरीको नाममा शेयर लगानी गरेको हो । यसका लागि गाउँपालिकाले रु दुई करोड लगानी गरेको हो । गाउँपालिकाले यहाँका तीन हजार ३२० घरधुरीको नाममा सो आयोजनाको शेयर लगानी गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत..
Results 592: You are at page7of 20